Taiwan: Mihetsika ny bilaogera mba hanavotra ny toeram-pitsaboana Lo-Sheng · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2018 11:43 GMT
Losheng Sanatorium dia hôpitaly ho an'ireo boka ao ambanivohitr'i Taipei. Nanomboka ny taona 1930, ity hôpitaly ity no hany hopitalim-panjakana ho an'ny mararin'ny Hansen (habokàna) ao Taiwan. Tamin'ny taona 2001, noho ny fanamboarana fitateram-bahoaka haingana ao Taipei, nikasa hanova ny Losheng ho hopitalin'ny kaominina ny manampahefana, ka namarana ny fitsaboana sy ny fikarakarana ireo mararin'ny habakoana teo aloha. Mpianatra maro, mpandamin'asa andrenivohitra sy FTMF (ONG) no niezaka hiaro ity toeram-pitsaboana ity nanomboka tamin'izany fotoana izany. 5 taona taty aoriana, nanam-bitana ihany izy ireo, nahatonga ny governemanta handinika endrika vaovao izay mitahiry ny 90% ny toeram-pitsaboana, fa tsy ny drafitra tany am-boalohany izay 41% monja.
Na dia izany aza, roa andro lasa izay, nangataka tamin'ireo mararin'ny habokàna teo aloha izay nijanona ao amin'ny toeram-pitsaboana mba hifindra alohan'ny 13 Martsa ny Departemantan'ny Rafitra Famindrana Haingana (Fitateram-Bahoaka) (Taipei), raha tsy izany hampiasa hery amin'ny fanatanterahana izany ny polisy. Ny marainan'io (8 Marsa), nanaparitaka olona 50 nivorivory teo anoloan'ny trano fonenan'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Yuan , Atoa Su Tseng-Chang, ny polisy miisa 200. Niantso izany ho andro mainty i Yao, bilaogera nanatrika tao tamin'izany fotoana izany :
Rehefa avy niresaka tamin'ny namany izay nanatrika tao koa, namariparitra ny tafika maherisetra tamin'ireo olona antitra ireo i DarkBringer :
Na dia ny hangataka amin'ny governemanta mba hihazona ny teniny hampiantso fihaonambe hiresahana ny drafitra vaovao ampahibemaso aza ny fihetsiketsehana, aleon'ny fampahalalam-baovao nifantoka tamin'ny fifandonana fa tsy tamin'ny fanambaran'ny mpanao fihetsiketsehana. Nanoratra ny fijeriny i PipperL:
Mandritra izany, Ancorena namoaka tao amin'ny bilaoginy fa nanapa-kevitra hifidy izay olona afaka manavotra an'i Losheng izy:
Tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Taiwan, bilaogera maro ankehitriny no miara-miasa amin'ny lahatsoratr'izy ireo, sary, lahatsary ary koa manao fandraisam-peo miaraka, mitady fanohanana avy amin'ny fiarahamonina. Mba hanamafisana ny hetsika ao amin'ny tontolon'ny bilaogy, nanapa-kevitra hanitatra ny hetsika eo amin'ny tontolo tena izy ireo bilaogera ireo. Raha mitatitra ny hetsik'izy ireo ny fampahalalam-baovao, maro ny olona afaka mahafantatra ny zava-mitranga. Tahaka ny teny nodradradradrain'i wenli:
Nosoratan'i Swpave, nahitsin'i PipperL sy abstract. Mpikambana ao amin'ny Tetikasa GV Shinoa avokoa ny rehetra.